Wararka - XYTOWER |"Muuqaalka" Ugu Quruxda Badan ee Dhismaha Awoodda
XYTOWER |"Muuqaalka" Ugu Quruxda Badan ee Dhismaha Awoodda
Nalalka kumannaan guri ayaa gadaashooda waxaa ku sugan koox aan la garaneyn oo ka durugsan sawaxanka magaalada.Aroor hore ayay kacaan oo madoobaan, dabaysha iyo dhaxan bay ku seexdaan, ama dhidid bay u noqdaandhismaha korontadahoos qorrax aad u kulul iyo roob culus.Waxay yihiin "goobaha muuqaalka" ugu quruxda badan xagga hore ee dhismaha awoodda.
Waa waardiyihii gacma-gaabkii duubnaa.
Haddii dhismaha mashruuca kaabayaasha korantada la barbar dhigo filimka, markaa xarunta maamulka dhismaha shaki la'aan waa soo saaraha filimka, waana inaad ka walwashaa wax walba.Dadka aqoonta u leh dabeecadda shaqadooda waxay og yihiin inay aad uga sahlan tahay inay tagaan goobta dhismaha marka loo eego xafiiska.Shaqo maalmeedkooda ka sakow, waxay wakhtigooda ugu badan ku bixiyaan mashruuca iyo goobta dhismaha.Maalmaha shaqada, waxay joogaan goobta mashruuca ama jidka loo maro goobta mashruuca.
Mashruucu waa in aanu noqon mid gaabis ah, dib u dhac ah, iwm, waana in hawsha lagu dhammeeyaa si aan wakhti la sugin oo aan dib u dhac lahayn.
Hogaamiyaha mashruuca wuxuu joogaa goobta dhismaha sanadka oo dhan si uu u kormeero horumarka dhismaha.Inta badan waxay soo galaan goobta dhismaha 8 subaxnimo, waxay tiriyaan shaqaalaha iyo qalabka, waxayna diyaariyaan hawlaha maalinta.Mararka qaarkood waxay ku mashquulsan yihiin ilaa goor dambe oo habeenkii ah.
Inkasta oo ay jiraan caqabado badan oo ku saabsan horumarinta mashruuca, iyada oo la kaashanayo qof kasta, waxaan ku duubnaa gacmahayaga oo aan u shaqeynaa si adag, waxaan ilaalineynaa wadashaqeyn dhow oo aan la leenahay kormeerka, dhismaha iyo qaybaha naqshadeynta, waxaanan si joogta ah u dardargelineynaa horumarka mashruuca iyadoo la hubinayo tayada mashruuca.
Waxay yihiin "koofiyadaha cas ee yaryar" ee maaraynta badbaadada goobta.Waxay mas'uul ka yihiin baaritaanka khataraha badbaadada ee iman kara, waxbarashada amniga iyo tababarka, xakamaynta ilaha khatarta ah ee kala duwan, iyo kala-soocidda xogta xafiiska.Maalinba maalinta ka dambaysa, waxay daboolaan goob kasta oo dhismo ah oo Jianshui ah waxayna diiwaangeliyaan qayb kasta oo xakamaynta badbaadada ah.
"Wu" waxay kori kartaa rashka si loo aqbalo, "Wen" waxay hagaajin kartaa qorista waxayna maareyn kartaa ganacsiga gudaha, "Wen Wu" wuxuu ku bilaabi karaa faahfaahin kasta si loo hubiyo shilalka eber ee maareynta badbaadada.
Dadaalka wadajirka ah ee xirfadlayaashan kaabayaasha, warshadaha kaabayaasha ayaa si tartiib tartiib ah kor ugu kacaya.Waxay yihiin "muuqaalka" ugu quruxda badan ee dhismaha awoodda.